トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Twin Seoul mahantra ara-batana sy ny toe-
Twin Seoul izay mizara ho roa
fomba hatry ny ela mba hahazoana [3500 Yen Free fanombanana] tena mamantatra ny hoavy, dia mety zara raha tojo eto amin'ity tontolo ity. Twin Seoul misedra sy fifohazana ara-panahy mitranga amin'ny fotoana izay, ny fihetseham-po dia tsy mitovy hita tahaka ny olon-kafa mihaona aminao.
, ary nariany ny hambom-pon'ny amin'ny hampiroborobo fifohazana ara-panahy, amin'ny alalan'ny nandraraka ny mpanohitra, ary ny tenany ho Seoul kambana tsy misy fepetra ny fitiavana, ny olona izay hampisaraka ny fandrosoana ny sehatra ho tonga iray izany.
amin'izany dingana, dia mety hahatonga ny fiovana eo amin'ny toe-javatra ara-batana. Mety miseho ho tezitra tamin'izany fotoana izany, nefa inona no tsy afaka mianatra na ny antony ho entina ao amin'ny hopitaly. Raha toa ka misy zavatra toy izany, dia tsy maintsy manaiky ihany koa fa ny dingana ara-panahy fifohazana.
ny fihaonana atao amin'ny fanovana ny kambana fanahy amin'ny fifohazana ara-panahy izay miseho amin'izany nihaona
kambana Seoul fiovana matetika mifandray amin'ny
? dimy saina, tokoa fiovana isan-karazany no ho avy amin'ny toe-javatra ara-batana. Ohatra, afaka manova ny toerana tena sakafo, fahatsapana zavatra sy mandre zavatra izay mitovy na manana Tsy toy ny teo aloha, dia miova ny dimy saina amin'ny toe-javatra maro.
? toe-batana sy hamaky ny fanahy fifandanjana
indraindray mandika ny toe-batana sy ara-tsaina fifandanjana izany fiovana. Koa izany no resahina, na ho tezitra, na fahitan-tory tampoka tsy misy antony, no azo jerena tsara amin'ny toe-javatra ratsy noho ny fifohazana ara-panahy. Ankoatra izany, Dari mafy tenda sy tratra na dia tsy misy aretina, toy ny naneno teo anatrehan'i sy ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana na mety koa ho ny zava-nitranga. Ankoatra izany, araka izany, na nanao maloiloy na fahafahana mahatsapa ao amin'ny tanany sy ny tongony, dia tsy vitsy afaka mitarika tezitra avokoa ny tena rehetra, fa tsy ny toerana iray manokana tena.
? hahazo fahatsapana hafahafa kundalini fifohazana
mahantra ara-batana sy ara-tsaina toe-mandanjalanja, indrindra Cundari Voalaza ho vokatry ny zava-nitranga fa ny roa fifohazana. Dia midika fa coiling toy ny bibilava na ny dragona dia ny Kundalini, avy chakra hanokatra ny fifohazana, ny angovo noho ny hazondamosiko mahazo ny fahatsapana fa niakatra ny coiling dia Kundalini fifohazana.
Kundalini ity arousal vokatry ny aretina antsoina hoe aretin'ny Kundalini, mahazatra ao amin'ny tontolo ara-panahy dia ny hiasa araka ny tokony no vokatry ny arousal.
fifohazana ara-panahy izay manomboka avy ka hihaona ny
kambana fanahy izay afaka miakatra ny sehatra amin'ny alalan'ny fifohazana ara-panahy tsy azo ihodivirana mba handeha amin'ny alalan'ny dingana iray izay olona roa lasa iray. Mahantra ara-batana toe izay mitranga mba hanao izany, dia toy izay halehanao any sy hitranga. Na iza na iza chakra niaina ny kundalini mifoha misokatra, mety ho lasa matanjaka kokoa ny fironana.
amin'ny handeha hamerina fifohazana ara-panahy toy izany, dia ho mahazo miakatra dingana iray eo amin'ny sehatra mba ho iray amin-kitsimpo tia ny kambana fanahy.
Amin'ny handeha hiverina Ri, dia ho mahazo miakatra dingana iray eo amin'ny sehatra mba ho iray amin-kitsimpo tia ny kambana fanahy.